China mativi pfapfaidzo kudzora fekitori uye vagadziri | Dingtaisheng
Iwo mana-mirayiridzo pfapfaidzo yemabhomba akarongedzwa pane yega yega tereyi inogona kusvika pamhedzisiro yakafanana pane chero chinzvimbo chetiyeti pane yepamusoro uye yepasi matanda, kumberi, kumashure, kuruboshwe, kurudyi, uye kuzadzisa iyo chaiyo yekupisa uye sterilization mhando. Iyo tembiricha yekudzora module (D-TOP system) yakagadzirwa neDTS ine kusvika pamatanho gumi nemaviri ekudzora tembiricha, uye nhanho kana kuenderana kunogona kusarudzwa zvinoenderana nezvakasiyana chigadzirwa uye kugadzirisa nzira yekudziya modes, kuitira kuti kudzokorora uye kugadzikana pakati pemabatch ezvigadzirwa akawedzeredzwa mushe, tembiricha inogona kudzorwa mukati me ± 0.5 ℃.
Chengeta huwandu hwakaringana hwemvura pazasi peiyo retort. Kana zvichidikanwa, chikamu chemvura ichi chinogona kubayiwa jekiseni roga pakutanga kwekudziya. Kune zvigadzirwa zvakapisa-kuzadza, chikamu ichi chemvura chinogona kufuridzirwa kutanga mutangi remvura inopisa wozojowa. Munguva yese yekuvhara mbichana, chikamu ichi chemvura chinomwayirwa pachigadzirwa nepombi hombe yekuyerera uye ina-nzira yekupfapfaidza mabhuti akarongedzwa pane yega yega chigadzirwa tireyi kuti uwane mhedzisiro imwechete pane chero nzvimbo yetiyiti pane yepamusoro uye yepasi matanda , kumberi, kumashure, kuruboshwe uye kurudyi. Saka yakanaka yekupisa uye yekudzivirira mhando inowanikwa. Nekuti iko kunongedzwa kwemhino kwakajeka, kwakaringana, yunifomu uye zvakakwana kupisa kwemvura inopisa kunogona kuwanikwa pakati petereyi imwe neimwe. Iyo yakanaka sisitimu yekudzora kusaenzana kwetembiricha mune yekugadzirisa tangi yemahombekombe makuru ekudzoka inoitwa.
Mukufamba kwese kuita, kumanikidza mukati mekudzora kunodzorwa nechirongwa nekupa kana kuburitsa mweya wakamanikidzwa kuburikidza neavhareji vharuvhu kuenda kune kudzosera. Nekuda kwekushaiwa mvura kwekudzivirira mbichana, kumanikidza kuri kudzokerwa hakukanganisike netembiricha, uye kumanikidza kunogona kuiswa zvakasununguka zvinoenderana nekurongedzwa kwezvigadzirwa zvakasiyana, zvichiita kuti zvishandiso zvinyanye kushandiswa (matani matatu-zvidimbu, magaba maviri-zvidimbu, anoshanduka kavha mabhegi, mabhodhoro egirazi, epurasitiki kurongedza nezvimwewo).
Plastic tireyi Usazviomesera kavha homwe
Zvigadzirwa zvemukaka zvakarongedzwa pakurongedza zvakapfava
Muriwo nemichero (howa, miriwo, bhinzi) zvakazara pamabhegi anoshanduka
Nyama, huku yehuku mune inoshanduka kurongedza mabhegi
Hove nehove dzegungwa mumabhegi anoshanduka
Chikafu chemucheche mumabhegi anoshanduka
Yakagadzirira-ku-kudya chikafu mune inochinjika mapakeji muhomwe
Chikafu chemhuka chakarongedzwa muhomwe dzakachinjika
Pashure: Cascade kudzokorora
Zvadaro: Kunyudza Mvura Kudzosera
Multifunctional Mvura Mwaya Kudzosera
Tsvina Kudzora Sterilizer
Mvura Mwaya Yeuka Muchina
Mvura Mwaya Sterilizing Retort Machine